अरु पार्टीका नेताहरुलाई समेत झस्काउनेगरी सीके राउतको पार्टीले बनायो अहिलेसम्म कुनै पार्टीले नबनाएको यस्तो नियम ! – GALAXY
अरु पार्टीका नेताहरुलाई समेत झस्काउनेगरी सीके राउतको पार्टीले बनायो अहिलेसम्म कुनै पार्टीले नबनाएको यस्तो नियम !
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अरु राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत हैरान बनाउने नियम बनाएको छ । उत्त, पार्टीले कर्मचारी वर्गलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नराख्ने भएको हो । जागिरे नेतालाई राजीनामा दिन वा आगामी निर्वाचनसम्म बिदामा बस्न निर्देशन दिइएको छ । जनकपुरमा तीन दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले जागिरदार रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई असोज २६ गतेभित्र राजीनामा दिन निर्देशन दिएको हो ।
समाज परिवर्तनका लागि केही त्याग गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको सुरुवात गरिएको उनको भनाइ छ । पार्टीलाई धम्की दिन नपाउनेः जनमत पार्टीले पार्टीमा कडा अनुशासन कायम गरिएको छ । कसैले पार्टीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्नका लागि राजीनामा दिने धम्की दिएमा त्यसलाई राजीनामा सरह नै मानिने निर्णय गरेको छ । पार्टीमा कसैलाई कुनै कुराको चित्त नबुझेर राजीनामा दिने धम्की दिएमा राजीनामा दिएसरह मानिने पार्टीको निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठक सुनिश्चितः हरेक तहको कार्यकारिणी समिति बैठक पनि तय भएको छ । कुन तहको बैठक कहिले र कहाँ बस्ने भन्नेबारे पार्टीको निर्देशिकामै उल्लेख गरिएको छ । तोकिएको समयमा बैठक अनिवार्य बस्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी बैठकको बारेमा निर्देशिकाले नै निर्देश गरिसकेपछि तोकिएको समयमा बैठक बस्नुपर्ने र सम्बन्धित सबैको सहभागिता अनिवार्य गर्ने उद्देश्यले कार्यतालिका तय गरिएको जनाइएको छ ।